Fampivoarana ny fivoaran'ny fifamoivoizana AI: AIFPv3: Tsy maneho ny fiaramanidina AI ... Fa nahoana?
fanontaniana Fampivoarana ny fivoaran'ny fifamoivoizana AI: AIFPv3: Tsy maneho ny fiaramanidina AI ... Fa nahoana?
1 taona 3 volana lasa izay #801 by laurentCazorla
Izaho dia namorona fiaramanidina fiaramanidina manokana Cevenn'air miaraka amin'ny FSX fototra B738 sy CRJ700 izay nandoko ny tenako ary izaho dia manidina miaraka. Na izany aza, te-hanangana ny fifamoivoizan'ny AI miaraka amin'i AIFPv3 aho ... Ny zava-drehetra dia tokony hanangana ny fiaramanidina AI ary hanangona azy ireo, Rehefa manomboka ny FSX Steam dia mandefa azy ho toy ny sehatra vaovao aho fa rehefa handeha ho any amin'ny seranam-piaramanidina izay heverina fa ny fiaramanidina mba hampisehoana ny seranam-piaramanidina, rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny AIFP aho, dia misy ny iray amin'izy ireo miseho ... manontany aho raha noho ny FSX Steam. Raha ny marina, raha te-hanangana AIFP miaraka amin'ny Steam (SE) aho dia tsy afaka mandeha lavitra. Tsy maintsy manangana ho FSX aho. Efa efa traikefa ny World of AI aho ary efa nanandrana nametraka KLM WoAI B738 aho tamin'ny fiaramanidina EHAM / LFMT, dia nihaona tamin'ny olana iray aho.
Tiako ho fantatra ve raha misy fomba hafa hananganana trafika AI tsy handalo amin'ny AIFP ... mahatsiaro ho toy ny kivy aho
Fotoana mamorona pejy: 0.220 segondra